Mariela Carril | | ကျွန်းများ, Malasia, အချိန်အား, အာရှခရီးသွားခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှသည်ကောင်းမွန်သောနေရာများရှိသည် ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေတွေနဲ့ကျွန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ဒါဟာဝေးလံတဲ့နေရာတစ်ခု၊ နာရီပေါင်းများစွာခရီးဝေးထွက်ပေမယ့်ငွေပမာဏကများလွန်းတယ်၊ ဒါကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်တက်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာခရီးသွားရကျိုးနပ်တယ်။
Malasia ၎င်းသည်မြို့တော်ကွာလာလမ်ပူရှိနယ်မြေအတော်များများကိုဖွဲ့စည်းထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဘုရင်စနစ်ဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေသန်း ၃၀ ခန့်ရှိသောကြောင့်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဤတိုင်းပြည်ကိုဖော်ပြရန်လူအများအသုံးပြုသောစကားလုံးသည်အဖိုးတန်သည်။ ဘာကြောင့်လဲသိလား
မလေးရှားကျွန်းများ သူတို့ကအရမ်းကွဲပြားခြားနားတယ် ဒါကြောင့်ခရီးသွား for ည့်သည်တွေအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။ နေနဲ့ပင်လယ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကမယုံနိုင်စရာပါ။ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုမဆိုကိုယ်ပိုင်အမြင်များဖြင့်စီစစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အထက်တွင်ပြောခဲ့သလိုသင်ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
လှပသောကျွန်းများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်းများဖြစ်သည် ဖနွမ်းပင်။ ၎င်းတို့သည် Peninsular မလေးရှားအရှေ့မြောက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိပြီး၊ ကျောပိုးအိတ်အကြားအကြီးအ ဦး တည်ရာ ကမ္ဘာ၏ သူတို့မှာအရှင်းဆုံးရေတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်တယ် snorkelling သွားပါ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှခြေလှမ်းများနှင့်ကြွယ်ဝသောအဏ္ဏဝါသတ္တဝါများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုမွေ့လျော်။
ငါးဖမ်းရွာများမှသင်လှေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည် ငါးမန်းနှင့်ပင်လယ်လိပ်များကိုကြည့်ပါ ဒါမှမဟုတ်နေဝင်ချိန်ကိုခံစားပါ။ ပြီးတော့မီးပတ်ပတ်လည်မှာလွင့်မျောနေတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတာကိုပြောစရာမလိုပါဘူး။
အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်စျေးနှုန်းများ၏နေရာထိုင်ခင်းရှိပါတယ်Tuna Bay ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းလိုစျေးကြီးတဲ့သူတွေဆီကနေ Abdul Chalet လိုစျေးသက်သာတဲ့သူတွေအထိ။ အဲဒီကိုရောက်ဖို့ကွာလာလမ်ပူ၊ Hentian Putra ဘူတာမှာဘတ်စ်ကားစီးပြီးကိုးနာရီခရီးသွားရပါတယ်။ သို့မဟုတ်မြို့တော်မှ Kota Bharu သို့ပျံသန်းပြီးကမ်းခြေရှိကွာလာလမ်ပူသို့အငှားယာဉ်စီးပါ။
သီရိ နောက်လှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက၎င်းကိုနှစ်ခြင်းခံပြီးကတည်းကခရီးသွားစျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးကျွန်း 70 ၌တည်၏။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအတော်လေးပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်ကျေးရွာများသည်ချစ်စရာကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းကမ်းလှမ်းမှုမှာမူမတူကြပါ။
သင်သည်စင်ကာပူမှကူးတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မလေးရှားရှိမည်သည့်နေရာမဆို Mersing သို့လည်းကောင်း၊ ထိုနေရာမှ ၂ နာရီကြာလှေဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကွာလာလမ်ပူကနေသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါ။ အာရှဇိမ်ခံပစ္စည်းကြိုက်လား?
ဒါကြောင့်ကံကြမ္မာပါပဲ လန်ကာဝီ. ဒဏ္ာရီတွင်၎င်းသည်ကျိန်အပ်သောကျွန်းဖြစ်သည်ဟုပြောထားသည်။ သို့သော် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကကျွန်း၏စီးပွားရေးကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းသို့ ဦး တည်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အခါကံကောင်းခြင်းမှာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကျွန်းတစ်ခုလုံးရှိသည် တာဝန်- အခမဲ့ ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖြစ်ကကြီးတယ်။
သင်ရှိသည် ဟိုတယ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ နှင့်အံ့မခန်း ကေအိုင်အို ၂,၂၀၀ မီတာအမြင့် ၇၁၀ မီတာ ရှိ၍ ၎င်းကိုသင့်အားလှပမှုအားလုံးတွင်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်စေသည်။ နေရာထိုင်ခင်းအရဆိုလျှင်ယခင်အုန်းခြံစိုက်ခင်းရှိစတိုးဆိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်သော Four Seasons သို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မလေးသမိုင်းကြောင်းနှင့်အမွေအနှစ်များအတွက်သင်သွားနိုင်သည် ပီနန်တစ်ချိန်ကဗြိတိသျှအင်ပါယာ၌အရှေ့ပုလဲကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အိန္ဒိယနှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများကြားရှိအင်္ဂလိပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများတွင်အရေးပါသည်။ ၂၀ ရာစု၏နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ခရီးသွား destination ည့်သည်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဂျော့ချ်တောင်းသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ယူနက်စကို၏အဆိုအရအစိုးရသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်သူဇုန်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခမ်းအနားများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဒါဟာ၎င်း၏များအတွက်ရေပန်းစားသည် လမ်းအစားအစာဆိုင်ခန်းများ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရှိသောကြောင့်ခရီးသွားများသည်လေယာဉ်ဖြင့်သာရောက်လာလေ့ရှိသည်။
သင်ရေငုပ်ချင်လျှင်, အလွန်ကောင်းသော ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ် Labuanထောင်နှင့်ချီသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြူကော်လာသူခိုးတွေအတွက်ဘဏ္ာရေးခိုလှုံခွင့်ရမယ်၊ သူ့မှာကိုယ်ပိုင် Formula 1 circuit တောင်ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲရေအောက်မှာရေငုပ်သမားတွေအတွက်သိုဝှက်ထားတဲ့ဘဏ္treာတွေရှိနေတယ် သြစတြေးလျ, အမေရိကန်သင်္ဘောများရှိပါသည် နှင့်စစ်သင်္ချိုင်းပင်တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ။ ဥပမာအားဖြင့်နှစ်စဉ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကမဟာမိတ်စစ်သား ၃,၉၀၀ သေဆုံးခြင်းကိုမှတ်မိသည်။
သင့်ကိုစိတ်ထဲစွဲလန်းစေသည့်အထီးကျန်နေရန်အတွက်ကျွန်းရှိသည် Layang-Layang ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများကတောင်းဆိုထားသည့်inရိယာတွင်အလံတစ်ခုသတ်မှတ်ရန်ပင်လယ်မှပြန်လည်ရရှိသောမြေမှမွေးဖွားခဲ့သောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။
Crystal ကြည်လင်သောရေသည်ပင်လယ်ရေနက်မှုနှင့်အတူကမ်းခြေသို့မီတာနှစ်ထောင်ကျော်လျင်မြန်စွာထိုးကျနေသောရေငုပ်သမားများအတွက်နောက်ထပ်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာဆယ်ယောက်အနက်တစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးငုပ်ဆိုဒ်များ။ လှပသောသန္တာကျောက်တန်းနှင့်မီတာ ၄၀ မြင်နိုင်သောမြင်ကွင်းရှိသည်။ နှင့်ငါးမန်းများ, လင်းပိုင်, barracudas, လိပ်နှင့် stingrays ။
ရေငုပ်ရန်နောက်ထပ်ကျွန်းမက္ကာသည် သီရိ ဂေဟစနစ်ကိုယခုအချိန်အတန်ကြာအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အတွက်တစ်နေ့လျှင်ရေငုပ်သမား ၁၂၀ ကိုသာခွင့်ပြုသည်။ သန္တာထောင်နှင့်ချီသောငါးများ၊ ငါးမန်းများ၊ ရေအောက်မှာလိပ်သင်္ချိုင်းတောင်ရှိတယ်။
ကျွန်းများ Redang, ပုဂ္ဂလိကကျွန်း Rawa (အားလုံး Sultan ကပိုင်ဆိုင်သည်) နှင့်၎င်း၏ကြော့အပန်းဖြေစခန်းနှင့်အတူ Pulau Pangkorသူတို့၏မလေးစိတ်ဓာတ်သည်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အခုတော့ကမ်းခြေရဲ့အလှည့်ပါ။ ထို့နောက်မလေးရှားတွင်ကျွန်းများစွာရှိသည် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကမ်းခြေရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ် အများစုမှာလူသိနည်းလွန်းသဖြင့်သူတို့သည်စျေးပေါကြသည်၊ ခရီးသွား er ည့်သည်နည်းသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးမှာမလေးကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဖြစ်သည်။။ သူတို့ကအလွယ်တကူရောက်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေရှိတယ်၊ ဒီမှာကမ်းခြေတွေပါ Redangကျွန်းများ ဖနွမ်းပင် နှင့်ကျွန်း၏အဏ္ဏဝါပန်းခြံများ သီရိ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်ကြသည် မလေးကျွန်းဆွယ်၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ကမ်းခြေ။ ငါကအခွန်လွတ်ကျွန်းအကြောင်းပြောနေတာပါ Langwakiသေးငယ်သော်လည်းလှပသောကမ်းခြေများနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာတို့နှင့်အတူမုတ်သုန်ရာသီမရှိဘဲ၊ မမေ့နိုင်သောရေတံခွန်များကြောင့်ကျွန်း၏ကမ်းခြေများ Pangkor နှင့် Borneoမလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဘရူနိုင်းတို့ကခွဲဝေထားသည်။
မလေးရှားနှင့်၎င်း၏ကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများသို့လည်ပတ်သောအခါအရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည် မုတ်သုန်လေလွတ်မြောက်ပါ။ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိမုတ်သုန်ရာသီသည်နိုဝင်ဘာမှမတ်လကြားဖြစ်သည်။ မိုးတွေရွာတယ် နောက်မှနေရောင်ခြည်နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကြွင်းသောအရာ၊ ကောင်းမွန်သောအချိန်ရလို။ မြေကြီးပရဒိသုတွင်ပျော်မွေ့လိုသောဆန္ဒသည်ကျွန်ုပ်အားဘယ်တော့မျှမလိုအပ်သောပုံရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများ
Carmina Yébenes Aguilera ဟုသူကပြောသည်
စိတ် ၀ င်စားစရာဆောင်းပါးပေမဲ့မုတ်သုန်မိုးတွေမရှင်းလင်းပါဘူး။ အောက်တိုဘာလမှာရာသီဥတုဆိုးတာမရှိတဲ့ဘယ်ကျွန်းကိုငါသွားနိုင်မလဲ။ !
Carmina Yébenes Aguilera အားပြန်ပြောပါ
Catalonia ရှိမိသားစုအားလပ်ရက်များ၊ L'Ametlla de Mar